HORII IRRA HORAAMA NAMAATTI CAALA! -
Qixxeessaa Lammii | Muddee 09, 2017
Lafa bari’e halkaneessuuf yaaluun makkalummaadha. Maallaqa nama irra ofitti aansuun kabajaa dhalli namaa uumaan qabu wal waakkachuudha. Kan horii qabu kabajuun kan horii hin qabne kabajaa dhabsiisuun hin barbaachisu. Qarshii harka namaattu tolcha. Nama garuu Rabbitu uuma. Waan Rabbi uume kabajaa dhoorgatanii waan harki namaa uumeef kabajaa kennuun wallaalumaadha. Sababa malee waan kana mara jetne.
Beekaa qarshii hin qabne irra wallaalaa qarshii qabutu har’aan tana kabajaa addaa qaba. Jabaa humna uumamaa qabu irra laafaa ibidda harki namaa uume harkaa qabutu irra sodaatama. Nama hojiin lafa irratti waa mul’isu irra nama afaaniin ykn haasawaan fagoo deemutu irra dhageettii qaba. Dhugaa gadi dhiisanii dhara harkatti maratanii ceehuun garuu galgala nama qaanessa. Nama namooma isaan kabajuun dirqama uumaan nama irra jiru. Dhiira, dubartii, dhibamaa, fayyaa, dureessa, hiyyeessa Jabaa, laafaa, beekaa, wallaalaa, goota, dabeesa, naafa, ballaa, duudaa, qarayyoo fi kkf hundaa Rabbitu uuma. Namooma irratti cuftuu wal qixa. Waan harki namaa guyyaa keessa uumu isaan waaqaan uumaman waliin wal qixxeessuun ykn irraa gaditti ilaaluun kabajaa dhoorgatuun cubbuudha.
Waan gadaan deemmatuun waan ofii dhalchan godhanii ittiin boonuu fi ittiin of faarsuun dogongora. Miidiyaaleen baraneen har’a addunyaa tana irratti oolii bultii hawaasa addunyaa walii galaa gabaasan cufti harka dhala namaan tolfaman. Kan nama dhibu garuu beektota meeshaalee hammayyaa kana uuman irra caalatti warri ittiin of faarsuu fi ittiin wal faarsuu barbaadan namoota irraa kireeffatan ta’ee jira. Beektotni, warraaqxotni, moototni addunyaa tanaa warra hojiin lafa irratti mul’atan osoo hin taane warra haasawa mi’aawan ta’anii jiru. Kun garuu dogongora guddaadha. Dhalli namaa dogongorsitoota akkanaa duukaa burraaqu ammoo of irratti abdi dhabdoota.
Wal gahiilee dhimma sochii Oromoo Oromiyaa keessatti bara dheeraaf deemaa ture sochii yeroo gabaabaa keessatti dhalchanii guddisan godhanii namootni ittiin of faarsuu barbaadan as bahuun yaadatnoo baranaa qofa soo hin taane yaadatnoo har’aati. Inni jiruu fi jireenya itti dhabe har’a maqaan isaa hin ka’u. Kan maqaan isaa ol ba’ee qilleensa keessa hafarfamu isa daqiiqaa tokkofis ta’u qabsoo sabaatiif miidhamee hin beekneedha. Dhara liqimsanii dhugaa tufuu irra dhugaa liqimsanii dhara tufuu wayya.
Qabsaawaan ykn warraaqaan moofaa fi haaraya hin qabu. Hamma hin wareegamin qabsoo irra jirutti yoomuu haarawuma. Qabsoon qawwee diinatti dhukaasuu qofaa miti. Qabsoon saalaa fi umrii hin daangeessitu. Waan danda’aniin waan qabaniin saba ofiif qabsaawuun ni danda’ama. Qabeenya ummata irraa gurataniin qabsawaa of taasisuuf dhidhitachuun garuu salphina. Ummatni Oromoo qaroodha. Gingilchaan ummata Oromoo biratti fudhatama nama gonfachiisuu fi fudhatama nama dhoorgu hojiidha.
QBO ABOn durfamtu dura dhaabbachuu ykn saamuuf wal gahiin namoota hagoo beektota Oromoo ofiin jedhaniin waamamu kasaaraa malee bu’aan argamsiise ammaan dura hin mul’atne. ‘Beektotni dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti wal gahii qopheessan kun dhuguma dhala Oromootii?’ nama jechisiisa. Qaama qabsoo harkaa qabu dhiisanii qaama kam waliin mari’achuuf akka ummta waaman namaa hin galu. Fayyaaleyyiin shira deemu kana quba hin qabnee fi hin beekne murna kana ABO seehanii jala badu. Garee ABO akkuma Tigreen jibbitutti jibbu kana ABO seehanii deeggaruun qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu qofa osoo hin taane irra ijjachuudha. Kan hanga ammaattuu qabsoo sabaa guddinna dhoorgee qancarse diina irra caalatti dhala Oromoo sammuudhaan gabroome akka ta’e beekkamuu qaba. Qaama maqaa Oromoon ijaaramee Itophiyaaf ykn Tigreef ifaaju bira dhaabbachuun of irratti yakka dalaguudha.
Murni aktivistoota Oromoo maqaa jedhu ofitti baasanii qilleensa keessa haasawaan addunyaa irra naannawan akeekaa fi kaayyoon isaanii Itophiyaa kalee bakkatti deebisuu akka ta’e beekuun barbaachisaadha. Oromoon Itophiyaa kalee dhiisee Itophiyaa har’aatuu hin fedhu. Oromoo fi Oromiyaa fedha. Beekaa wallaale gorsuuf yaaluun bilaasha of dadhabsiisuu ta’a. Beektotni Oromoo beekaa jallatan hiree Oromoo jallisuuf waan hin goone hin qaban. Beekkomsi sabaaf hin fayyadne isaaniifuu waan fayyadu hin qabu waan ta’eef ummatni Oromoo dhaaba isaa ABOn ala qaama kamuu abdachuu hin qabu. Biyyaa fi sabummaa humnaan sarbame humnaan deeffachuuf karaan tokkichi kaayyoo fi akeeka eebbifamaa ABO hordofuu callaadha.
ABOn horii ykn qarsii akka TPLF ykn OPDO ala kanaa hin qabu jechuudhaan qarshiif ykn doolaaraaf kabajaa laachuun dhaaba ofii kabajaa dhoorgachuun boolla umrii guutuu keessaa bahuu hin dandeenye keessatti of ittisuudha. Kanaaf, horii har’aa irra horooma boruuf bakka ol aanaa kennuun ulfinatti nama geessa waan ta’eef dhalli Oromoo marti calalaqa murnootni gara garaa deemaniin booji’amee kaayyoo isaa kan walabummaa fi bilisummaa irraa maqee gara qileetti fiiguu hin qabu!
ABOn horooma Oromooti!
Gadaan tan Oromooti!
Wayaaneen ni kufti!